म भर्सटाईल गायक : बुढाथोकी | bethanchokkhabar.com
म भर्सटाईल गायक : बुढाथोकी
आइतबार, फाल्गुण २६, २०७५ | ११:५८:१८ |
शशीशेखर बुढाथोकी, लोकप्रिय गायक काभ्रे –
कहिले फिलिली रेलमा कहिले कुन महोत्सवमा उधुम गर्ने गायक शशीशेखर बुढाथोकी काभ्रेका उदयमान कलाकार हुन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा पिता हरिकृष्ण बुढाथोकी र माता विष्णुदेवी बुढाथोकीको कोखबाट जन्म लिएका गीतकार, गायक तथा सङ्गीतकार शशि शेखर बुढाथोकी सानै उमेरदेखि गीत सङ्गीत रुचाउँथे । बि. ए. सम्मको अध्ययन गरेका उनी कलेजमा पनि गायन प्रस्तुतीहरु दिने गर्दथे । उनले ‘दिल दिने कुरा, क्या राम्रो नेपाल, माया तिम्रो त्यो, हातैमा घडी, तिम्रै वरिपरि’ जस्ता गीतहरु गाएका छन् । राष्ट्रीय, लोक, लोक पप, आधुनिक गीतहरु गाएका शशी भन्छन् । ‘गायक भएपछि सबै खालका गीत गाउनु पर्छ ।’ आफूलाई भर्सटाईल गायक भन्न रुचाउने उनी भन्छन् । ‘सुरु सुरुमा त गीत गाउन धेरै गाह्रो भएको थियो, पछि रमाइलो लाग्दै गयो र सहज पनि हुँदै गयो ।’ उनी गीत लेख्ने र कम्पोज दुबै काम गर्छन् । उनले गाएका गीतमा प्रायः आफ्नै शब्द र सङ्गीत रहेका छन् भने उनले अरुको गीतमा पनि सङ्गीत दिएका छन् । ‘सबै तयारी भैसकेको छ, चाँडै नै नयाँ कोसेली लिएर स्रोता दर्शकमाझ देखा पर्ने छु’ उनले जानकारी दिए । उनी आफूले गाएको गीतमा आफैं अभिनय पनि गर्दछन् र अभिनयमा समेत उत्तिकै रुची भएको उनले बताए । सानै उमेरदेखि गीत सङ्गीतमा रुची र गायक बन्ने रहर थियो तर यति चाँडै गायक बन्छु होला भन्ने चाहिं सोचेको थिइन’ उनी यथार्थ स्पष्ट पार्छन् । ‘सङ्गीत सिक्दैछु र प्रयास गर्दै छु । सङ्गीत सिर्जना र प्रस्तुतिलाई निरन्तरता दिने छु’ उनै काभ्रेका रक स्टार अनि नेपाली सांगेतिक आकाशका उदयमान तारा बुढाथोकीसँग गरेको कुराकानीको अंश
0 गित संगितमा कसरी लगाव बस्यो ?
– सबैको फरक फरक खालको रहर हुन्छ । तर मानव जीवनमा एक पटक नायक र गायक बन्ने रहर सबैलाई हुन्छ । म स्कूल तथा कलेजमा गित गाउने कार्यक्रम भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । मलाई खासमा गित संगितको नसानै लागेको थियो । सानै उमेरदेखि गित गाउने भएकाले सबैले हौसाउने गर्नुहुन्थ्यो ।
मलाई मेरो परिवार र साथीभाईले सदैव राम्रो गाउने भनेर भन्नु हुन्थ्यो । म पनि उहाँहरुले दिएको हौसला अनुसार गित गाउने गरेको थिए । त्यसैले जब उमेर बढ्दै गयो । यसको सौख बढ्यो अनि मेरो जीवनमै संगितमा सुम्पने प्रयास गरे । अहिलेसम्म निरन्तर त्यसमा लागेको छु ।
0 गित संगितमा लागेर परिवार पाल्न सकिन्छ त ?
– परिवार पाल्ने घर बनाउने गाडी किन्ने सम्पत्ति जोड्ने सबै कुरा आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो । सबै कुरा भएर पनि मैले सन्तुष्ट हुन सकेको छैन भने मेरो श्रीसम्पत्तिको कुनै पनि अर्थ छैन । तर म गित गाएरै भएपनि सन्तुष्ट रहेको छु भने मेरो जीवन सफल हुन्छ । तर मैले अहिलेसम्म परिवार पाल्न सक्छु भनेर यो पेशामा लागेको छैन । तर म यो पेशावाट सन्तुष्ट भने पक्कै रहेको छु ।
0 बजारमा अहिलेसम्म कति गित ल्याउनु भयो ?
– मेरो बजारमा करिब आधा दर्जन गित आएका छन् । सबै गितहरु मैले यु ट्युवमा समेत हालेको छु । केही गितहरु बजारमा आउने क्रममा रहेका छन् ।
मैले ‘दिल दिने कुरा, क्या राम्रो नेपाल, माया तिम्रो त्यो, हातैमा घडी, तिम्रै वरिपरि’ जस्ता गीतहरु गाएको छु । राष्ट्रीय, लोक, लोक पप, आधुनिक गीतहरु गाएको छु । सबैले राम्रो प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । ‘गायक भएपछि सबै खालका गीत गाउनु पर्छ ।’ म भर्सटाईल गायक हु । ‘सुरु सुरुमा त गीत गाउन धेरै गाह्रो भएको थियो, पछि रमाइलो लाग्दै गयो र सहज पनि हुँदै गयो ।’ त्यसपछि गीत लेख्ने र कम्पोज दुबै काम गर्दैै आएको छु ।
0 जीवनमा संगितमा लागेर के बन्ने ईच्छा छ ?
– मैले जीवनलाई कसरी बुझेको छु भने म असल नागरिक बन्न पाए पुग्छ । म संगित क्षेत्रमा लागेको कारणले म असल गायक तथा संगितकार बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर मैले सुरुमा भनेको थिए नी सबैलाई गायक तथा नायक बन्ने अचम्मको सौख हुन्छ । मेरो पनि सौख आयो तर मैले निरन्तर मेहनत गरेर केही गितहरु बजारमा ल्याउन सकेको छु । अझै मेरो साधना पुगेको छैन । मैले मेरो जीवनको लक्ष्य भेट्टाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । साधना गर्नु छ । अनिमात्रै मैले मेरो सपना भेट्टाउने छु जस्तो लागेको छ ।
0 अहिले जो पनि गायक बन्ने होड चलेको छ नी ?
– हेर्नुहोस संसारमा सबैभन्दा आनन्द दिने बिषय के हो । के बिषयले मानव जातीले शान्तिको अनुभुत गर्न पाँउछ । शान्तिको मुख्य आधार के हो । यो सबैको उत्तर भनेको संगित मात्र हो । गित संगितले मानव जीवनलाई शान्तिको मार्गमा दौडाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
मानवको शरिरमा रहेको तनाव शान्तिले मेटाउन सक्छ । गित सुन्दा आफैले गाँउदा मनका सबै कुराहरु हटेर जान्छन् । त्यसैले सबैले गित गुन्गुनाउनु हुन्छ । तर सबै गित गाउने व्यक्ति गायक बन्न सक्दैनन् । तसर्थ म पनि गायक बन्ने प्रयासमा छु । धेरै महोत्सवहरुमा पुगेर गित गाउने गरेको छु । संगितको शिक्षा दिन्छु । सबैले गायक भनेर चिन्नु हुन्छ । तर अझै म सिक्दै छु । गायनमा निखारता ल्याउन रियाज गरिरहेको छु ।
अझ अर्काे कुरा धेरै कुरा मान्छेले भन्न सकिरहेको हुँदैन । त्यो कुरा बाहिर ल्याउनको लागि मानिसहरुले गित संगितको साहारा लिने गर्नु हुन्छ । वेदनाका कुराहरु बाहिर ल्याउनको लागि संगित निक्कै सहयोगी हुने गरेको छ । त्यसैले सबैले गित गाउनु भएको होला ।
0 गायन र संगित क्षेत्रका समस्याहरु के के होलान् ?
– हेर्नुहोस सबैभन्दा ठूलो कुरा बजारको समस्या रहेको छ । नेपालको संगितको बजार ज्यादै सानो छ । सानो बजारमा निक्कै प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यसले धेरै गायक जन्माउने र पलायन हुने खतरा बढाएको छ । बजारको अभावमा लगानी उठ्न नसक्ने पिडामा गायकहरु रहेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको छ ।
0 युवा गायकको पछि महिला फलोअर धेरै लाग्छन् हो ?
– हामीले सबैलाई समान दृष्टिकोणवाट र्हेनुपर्छ । श्रोता हाम्रा लागि बराबर हो । तर श्रोताहरुले माया भने गर्नुहुन्छ । हामीले हाम्रो गित संगितलाई माया गरेको भनेर सम्झनुपर्छ । त्यसैले केटाकेटी सबैले माया गर्नुहुन्छ । कोही बिशेष भनेर हुनुहुन्छ । कोही नजिक भैहाल्नु हुन्छ । तर हामीले उहाहरुलाई नजिक पनि नराख्ने अनि टाढा पनि नराख्ने अभियानमा छौ ।
गित संगितलाई माया गरौ । स्थानीय कलाकारहरुलाई माया गरौ । हामी हाम्रो समाजका कुरालाई गित संगित मार्फत अघि बढाउनेछौ ।